ပန်ဒိုရာ: အနုပညာ အတတ်ပညာ
Posted by pandora at 5:31 PM
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရာဘင်ဒြာ လက်ရာပြန်ဖတ်ရတာပဲ ဆိုယင်တောင် တော်တော် ကောင်းလှပါပြီ။
မတူညီတဲ့ အနုပညာဖန်တီးမှုကို ယှဉ်ပြီး တိုင်းထွာ ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်....
အဲဒီဆုံးဖြတ်သူဟာ.....အနုပညာကို နားမလည်သေးလို့ ပါ...
ဘာဘဲပြောပြော ဒီပို့ စ်လေးကို တင်ပြပေးတဲ့ အတွက်
i think htin lin or somebody translated this piece too.. cant remember though..
urs is realli nice..ma pan..pls post more frequent..heee..^^
အနုပညာဆိုတာ ထူးခြားဆန်းကြယ်ပြီး မှော်လိုပဲ လူ့ရဲ့ စိတ်ကို ညှို့ယူ ဖမ်းစားနိုင်တယ်။ ဒီပို့စ်လေးမှာလဲ ဒါကိုပဲ ရည်ညွှန်းသွားတယ် ထင်မိတယ် ညီမလေးရေ..
မဝေဖန်ဝံလို့ ခံစားဘဲ သွားတော.တယ်။
အတတ်ပညာချည်းသက်သက်နဲ့တော့ ဖမ်းစားနိုင်တဲ့ အနုပညာတွေ မရနိုင်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။
အတတ်ပညာမပါတဲ့ အနုပညာချည်း သက်သက်ကလည်း ဖမ်းစားနိုင်စွမ်း မရှိဘူးလို့ ယူဆပါတယ်။
ကျနော့် တဦးတည်း အယူအဆကတော့ ဖမ်းစားနိုင်စွမ်းတဲ့ အနုပညာတခုအတွက်တော့ ခံစားချက်က အဓိကကျတယ်။
အတတ်ပညာကို လေ့လာယူလို့ရတယ်။ ခံစားချက်ကို လေ့လာယူလို့ မရပါ။ နှလုံးသားချင်းတူမှသာ ခံစားချက်တူမှာပါ။
အနုပညာ အတတ်ပညာ ကို ဖတ်ဖို့ စိတ်ကိုဖွင့်လိုက်တာ/
အနုပညာ အတတ်ပညာ ကို ဖတ်လို့ စိတ်ကပွင့်သွားတာ
နှစ်ခုစလုံး က ပညာ တော့ပညာချည်းပါပဲ။
တစ်ခုက လှည့်စားမှုမပါ၊လုပ်ယူထားခြင်းမဟုတ်တဲ့ နှလုံးသွေးဖြစ် ခံစားချက်၊ အစစ်အမှန် နဲ့ ပွင့်အံကျလာတဲ့ လူအားလုံးရဲ့ နှလုံးကို ဆွဲဆောင် ပြုစားနိုင်လွန်းတဲ့၊ ဘုရင်ပါမကျန် လူတန်းစားမရွေး ကူးစက်နားလည်ခံစားနိုင်အောင်တင်ပြနိုင်တဲံ့ပညာ..ဧည့်စာဆို ကဒီပညာနဲ့ခံစားမှုတွေကို မင်းပရီသတ်ရင်ထဲ ချွင်းချက်မရှိ ကျဲချခဲ့တယ်။
နောက် တစ်ခုက ခံစားမှုပါချင်မှပါမှာ ဖြစ်ပေမယ့် သင်အံ မှုနဲ့ ကျွမ်းကျင်ခဲ့တဲ့ အတတ်နဲ့ ဖန်တီးနိုင်စွမ်းတဲ့ ပညာ..
ဘုရင့်စာဆို တစ်ယောက်အနုပညာအရ ရှုံးနိမ့်သွားတာ ကို ရှိပါစေတော့။ အဆိပ်တစ်ခွက်နဲ့ လဲပစ်လိုက်တဲ့ သူ့ ကျရှုံးခန်းကြောင့် သူတစ်သက်လုံးသင်အံလာခဲ့တဲ့၊ မီးဖိုထဲပစ်လိုက်တဲ့ စာတွေထဲက အတတ်ပညာဆိုတာကိုရော တကယ်တန်း ရခဲ့တာ ဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့ လားလ သံသယ ဖြစ်စရာ။ ဒါကိုကအနုပညာတစ်ခုပဲလား။
နောက်ဆုံးထွက်သက်မှရောက်လာ ပြီး ဆုလာဘ်အဖြစ် လည်တိုင်က ပန်းကုံး ချီးမြှင့် လိုက်တဲ့ ဘုရင့်သမီးတော် ရဲ့ လုပ်ရပ်ကရော အနုပညာလား၊ အတတ်ပညာလား.....
စဉ်းစားစရာတွေံ နောက်ဆက်တွဲ ခံစားစရာတွေ အများကြီးပေးတဲ့ ဘာသာပြန်အတတ်ပညာနဲ့ တင်ပြထားတဲ့အနုပညာပို့ စ်တစ်ခုပဲ...
အနုပညာနဲ့ အတတ်ပညာ.. ကွာသလား ဆိုတော့ သေချာကြီး မခွဲခြားတတ်ပါဘူး။ ဥာဏ်မီသလို ခံစားကြည့်လိုက်တာပါပဲ။
အတတ်ပညာကတော့(အတန်းပညာမဟုတ်) လောကကြီးက နေ
ပန်းတွေကိုသိပ် မြတ်နိုးတဲ့ သူ တစ်ယောက် ရှိတယ်တဲ့.. သူဟာ ပန်းတွေကို ပြုစုတယ် ပန်းတွေရဲ့ မွှေးရနံ့ကို ရှုရှိုက်တယ်.. ပွင့်ချပ်လွှာတွေကို ပီတိအဟုန်နဲ့ အသာအယာ ထိကြည့် တယ် တို့ကြည့် တယ်... သူဟာ ပန်းတွေကို အလှပဆုံး ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုပြုစုရမလည်းဆိုတာ ကို သိသော ကျွှမ်းကျင်တဲ့ ပန်းပျိုးလက်ပိုင်ရှင် ဖြစ်ပါသတဲ့။ ပန်းတွေရဲ့ အကြောင်းကောင်းကောင်း သိ.. မွှေးရနံ့တွေကို ခံစားလို့ရသော်လည်း အဲ့ဒီပန်းတွေရဲ့ ဂုဏ်သတ္တိ မျိုးကို တော့ သူကိုယ်တိုင် မပိုင်ဆိုင် နိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့.. ပန်း ကပန်း ဖြစ်ပြီး ပန်းအဖြစ် သိနေတဲ့ သူ့စိတ်က သက်သက်တစ်ခုနဲ့ သူ့ရဲ့ ကျွှမ်းကျင်လှတဲ့ ပန်းပျိုးခြင်း အတတ်ပညာ ဟာ နယ်ပယ်နှစ်ခုရဲ့ အဲ့ဒီအကွဲအစပ်ကြားကနေ ၀င်ရောက် နှိပ်ဆက် တဲ့တွက် သိသူနဲ့ အသိခံရသ၀တ္ထု နှစ်ခု အကြား နှစ်မျိုးကွဲပြား နေရောတဲ့..
ဒါပေမဲ့ ပန်းကို ပြုစုသူဟာ ပန်းလိုလှပြီး ပန်းလိုမွှေးမယ် ညိုးညိုးနွမ်းနွမ်း ဖြစ်ရင်လည်း ပန်းကို ပန်းကဲ့သို့ မြင်ခြင်းထက် ကျော်လွန်ပြီး သူ့ကိုယ့်သူ (သူကိုယ်တိုင်) ပန်းတစ်ပွင့် အဖြစ်မြင်နေခဲ့မယ်ဆိုရင် ပန်းနဲ့သူ တစ်သားတည်းဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ အသိဥာဏ်မျိုး ကို ရနိုင်ပြီး ပန်းပျိုးခြင်း အတတ်ပညာဟာ ထပ်မနှိပ်ဆက်နိုင်တော့ဘူးတဲ့... (အဲ့ဒီ အသိဥာဏ်မျိုးကို ဟိုး.. ဥပနိသျှတ်ဝါဒ ခေတ် တုန်းကတော့ အဘေဒဥာဏ် လို့ ခေါ်ခဲ့ကြတာပေါ့..) (အင်း.. အများကြီးနော်.. ထပ်တွေးရင်. ပန်း ကို သူ့ အတွက်စိုက်မှာလား ကိုယ့်အတွက်လား ဒါမှမဟုတ် အလှ စိုက်တာလား ပြီးတော့ ဒဂိုး ရဲ့ အနုပညာ များထဲက အတတ်ပညာ... သူ့ရဲ့ အနုပညာထဲက လွမ်းမိုးမှု ဒဿန.. အရှေ့တိုင်းနဲ့ အနောက်တိုင်း.. အာ.. တော်ဘီ.. :D.. (သန်းကောင် ကို တော်တော်ကျော်တာတောင် အိပ်မရသေးလို့ ကွန်မန့်က စိတ္တဇ ဆန်နေရင်တော့ ခွင့်လွတ်) ..
တကယ်က ဘာသာပြန်တာ သက်သက်မဟုတ်ပဲ ပန်ဒိုရာမှုပြုထားတာပေါ့… ဒီတော့ တဂိုးထဲမှာ ပန်ဒိုရာက စိမ့်ဝင်စီးမျောလို့ … ဖတ်ရင်းနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင် ရှာမတွေ့ တော့ဘူး… သိမ်မွေ့ တဲ့ စာဆိုရဲ့ ကဗျာဂီတထဲမှာ ပျော်ဝင်သွားလို့ လေ… ဒါကလဲ နှလုံးသားတခုချင်းစီရဲ့ ခံစားတတ်မှု၊ ခံစားနိုင်မှုအတိုင်းအတာနဲ့ များ ဆိုင်မလားပဲ… ဘုရင်ကြီးရဲ့ နှလုံးသားနဲ့သမီးတော်ရဲ့ နှလုံးသား ခံစားခံယူတတ်မှုချင်း မတူသလိုပေါ့နော်… ဘုရင်ကြီးကို မဖမ်းစားနိုင်တာနဲ့ ပဲ အနုပညာရဲ့ ကျရှုံးခန်းလို့ မဆိုလိုနိုင်တာ ဇာတ်သိမ်းမှာ ပြထားသလိုပေါ့… တခုသတိသွားထားမိတာက သိမ်မွေ့ တဲ့ စာဆိုက အနုပညာသမားသက်သက်ဆိုတာကိုပါ… အတတ်ပညာလေးနဲနဲသာ ရောနှောနေရင် သူအဆိပ်သောက်ဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူးနော်… ဒါပေမယ့် ရိုးသားတဲ့အနုပညာသမားက အနိုင်ရရုံသက်သက်နဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကို လာခဲ့တာ မဟုတ်တာတော့ သေချာတယ်… သူ့ အနုပညာနဲ့သူ့ နှလုံးသားတခုကို ပကတိ ဖွင့်ပြဖို့ လေ… အဲဒီရိုးသားခြင်းကပဲ အနုပညာရဲ့ အလှတရားလို့တို့ ထင်မိတယ်…
မမပန်ရေ...ဆုဝေကတော့ အနုပညာဆိုတာ နှလုံးသားနဲ့သာ ခံစားနားလည်နိုင်တဲ့၊ သင်ပေးတိုင်းလဲ မတတ်မြောက်နိုင်တဲ့၊ သိမ်မွေ့နက်နဲတဲ့ အတတ်ပညာတစ်ခုလို့ ထင်တယ်။
ဆုဝေ တွေးမိတာကို ပြောပြတာပါနော် ... အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရလောက်အောင်တော့ မသိပါဘူး ... ခံစားမှုရသမပါတဲ့ အတတ်ပညာသက်သက်က လူတွေရဲ့ စိတ်နှလုံးကို တစိတ်တဒေသလောက်ပဲ ဖမ်းစားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ကိုဒူကဘာ.. မှတ်ချက်အတွက် ကျေးဇူးပါနော်
ကိုဆူး... ဟုတ်တယ်။ အနုပညာဆိုတာ ပြိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကိုဆူးအတွေ့အကြုံမှာလည်း မှတ်သားလိုက်ရပါတယ်။
anonymous... thanks. I hope I can post more frequently. :)
မမိုးချိုသင်းရေ...ညို့ယူတတ်တဲ့အနုပညာ အကြောင်းကို နားလည်နိုင်ဖို့ ခက်ခဲတယ်နော်။
မခင်ဦးမေ.. ခံစားသွားတာ ကျေးဇူးပါ။
မာရေးသျှင်...ပိတ်မရတော့ရင်လည်း ဟစိစိသာ လုပ်ထားလိုက်ပါလေ။
ကိုမောင်ရင်.... ပိုပြီး စဉ်းစားရတာ ဦးနှောက်စားသွားပြီဗျာ။
ရွှမ်းမီ မိုးကြယ်.. ခံစားသွားတာလေးတွေကျေးဇူးတင်တယ်နော်။
စိတ္တဇဆန်တဲ့ မှတ်ချက်ပိုင်ရှင်ရေ... ပန်းရဲ့ အကန့်အသတ်ပြင်ပက ပွင့်တတ်တဲ့ ပန်းတွေလည်း ရှိတယ်ဆိုပဲ။ ဘယ်လိုပြောရမလဲ မသိတော့ဘူး။
မတန်ခူး နဲ့ ကိုပေါ.. ရိုးသားခြင်းသစ္စာအလှတရား.. အင်း. အလှကိုရှာ ဘယ်မှာမတွေ့ ဖြစ်တော့မယ်။ မှတ်ချက်များအတွက် ကျေးဇူးပါ။
ဆုဝေ..ဆုဝေ တွေးမိသလို ကိုယ်လည်း ထင်မိပါတယ်။
ကိုဝင်းလတ် ... ကျေးဇူးပါနော်။
လေးမတို့ ရဲ့ ဗိသုကာပညာဆိုတဲ့ အတတ်ပညာမှာတော့ အနုပညာသဘောတရားတွေ အများကြီး ပျော်ဝင် ဆက်နွယ်နေပါတယ်...။ ဒီလိုပဲ
အနုပညာထဲမှာလည်း အတတ်ပညာ အတိုင်းအတာတစ်ခုထိပါဝင်သင့်ပါတယ်...။
အနုပညာ အတတ်ပညာရဲ့ အနှစ်သာရ အဓိပ္ပာယ်ဆိုတာထက် မပန်ရဲ့ ရေးဖွဲ့ပြန်ဆိုမှု အနုပညာစွမ်းကိုတော့ တကယ်ပဲ နှစ်သက်သဘောကျမိတယ်။း)
should be balance :)